Ampidino Anno 1800 1.0 ho an'ny Windows
Ampidino Anno 1800
Sehatra: Windows Version: 1.0 Fiteny: English
Ampidino Anno 1800, Navoaka ho lalao paikady ny Anno 1800. Anno 1800 dia ny kinova 2019 anny lalao paikady izay efa an-dàlam-pandrosoana nandritra ny taona maro. Anno 1800, novolavolaini Blue Byte ary navoakanny Ubisoft, dia misongadina fa iray aminireo lalao paikady novolavola nandritra ny fotoana ela.
Anno 1800, izay tsy mitovy aminny lalao paikady hafa sy ny rafitrizy ireo izay niova haingana nandritra ny Revolisiona Indostrialy, izay nahitana teknolojia vaovao ary nampahafantarina ireo kaontinanta sy fiarahamonina vaovao, manokatra lalana ho anao hamoronana sivilizasiona vaovao aminny eritreritrao. toerana aminny marainanny. Ny lalao dia hisy ny fampielezan-kevitra tantara, ny fasika boaty ary ny maody marobe.
Toa ani Anno 2205, ny lalao dia hanasongadinna lalao marobe, fa tsy toy ireo teo alohany,tsy azo sarahina ny fotoananny ady sy ny fananganana tanàna. Ary koa, ireo sarintany namboarina kisendrasendra dia hanome fiverenana indray avy aminny andiany teo aloha taminity andiany ity, miaraka aminireo mpanohitra AI, entam-barotra azo entina ary entana natsangana teo aminny sarintany mitovy aminilay mpilalao. Manampy ny mpilalao handrafitra ny tanànany aminny trano nomanina mifanohitra izany, nefa tsy mandany loharano sarobidy aminny fananganana tena trano.
Raha te-hanangana trano ny mpilalao iray nefa tsy manana loharanom-pahalalana tsy ampy dia afaka mametraka ny rafitry ny trano izy avy eo satria mahazo loharanom-bola bebe kokoa ilay mpilalao. Raha vantany vao vita ny drafitra ary angonina ny loharanon-karena ilaina, ny trano tsirairay ao anaty drafitra dia azo foronina aminny tsindry iray monja. Mpizahatany,Hitoby any aminny tanàna heveriny fa manintona izy ireo ary aminizany dia mandray anjara aminny fidiram-bolanny tanàna.
Ny mpizahatany dia mihevitra zavatra tsara tarehy toy ny tany voajanahary, fety eo an-toerana, ary firavaka haingo isan-karazany, saingy tsy tianizy ireo ny fandotoana, korontana eo an-toerana, ary indostria mitabataba na maimbo. Noho izany, ny mpilalao dia tsy maintsy mandanjalanja ny hatsarana voajanahary aminny tanàna iray aminny tombony indostrialy.
Anno 1800 Specs
Fanavaozana farany: 09-04-2021